Lisitry ny rindranasa finday sy tranokala finday ho an'ny orinasanao
Mbola gaga ihany aho amin'ny ankapobeny ny isan'ny tranonkala izay mbola tsy tazana amin'ny finday - ao anatin'izany ny mpanonta be dia be. Ny fikarohana nataon'i Google dia nampiseho fa 50% ny olona handao tranokala iray raha tsy sariaka amin'ny finday. Tsy fotoana fotsiny ahazoana mpamaky fanampiny, ny fanamboarana ny tranokalanao hampiasa finday dia afaka manatsara ny traikefan'ny mpampiasa anao hatrizay mahalala finday izao ny olona! Miaraka amin'ny efijery sy rafitra fandidiana marobe, ny fanatsarana ho an'ny finday dia tsy sombin-mofo intsony.
Ireto misy fitaovana hanamboarana ny tranokalanao ho vonona.
Appifier - Ny Appifier dia manangana fampiharana iOS, Android, ary Windows teratany ao anatin'ny 60 segondra.
AppInstitute - App Builder ho an'ny tompona orinasa kely be atao.
Appery.io - Ny hany sehatra miorina amin'ny rahona misy fitaovana fampivoarana ny maso, ary serivisy backend mirindra
AppsGeyser - AppsGeyser dia serivisy MAIMAIMPOANA izay mamadika ny atiny ho App ary manome vola anao.
Appy Pie - cloud based DIY Mobile App Builder na App Creation Software izay mamela ireo mpampiasa tsy manana fahaiza-manao fandaharana, hamorona fampiharana ho an'ny fampiharana Windows 8 Phone, Android & iPhone ho an'ny finday sy finday avo lenta; ary apetaho amin'ny Google Play & iTunes.
bMobilized - fitaovana tsotra sy tsotra izay mamadika ho azy ny votoatinao amin'ny tranokala voavolavola finday miaraka amina fanamboarana fototra.
Bizness Apps - Ny fomba haingana sy mora amin'ny orinasa rehetra hamoronana fampiharana iPhone amin'ny $ 39 isam-bolana!
Afo mirehitra - Sehatra Mpanamboatra App mahery miaraka amin'ny Whitelabeling.
Codiqa dia mpanamboatra drag-and-drop mahery matanjaka amin'ny famoronana rindranasa finday sy tranokala miampita sehatra.
Como - Mamorona ny fampiharana findainao manokana ho an'ny orinasa rehetra.
DudaMobile - amin'ireo fitaovana nosedraiko rehetra dia mety ity no mora nampiasaina sy nampiharina indrindra! Ny mpamosavy fototra dia afaka mamela anao hanana tranokala finday ao anatin'ny minitra vitsy. Izy ireo koa dia mamela anao hanaisotra ny doka rehetra ataon'izy ireo ary hampiasa sehatra manokana ho an'ny vola fanampiny fanampiny.
FiddleFly - mpamorona tranokala finday mora ho an'ny masoivoho hiara-miasa amin'ny mpanjifany amin'ny fananganana tranokala finday.
Mobicanvas - CMS finday maimaimpoana, sintomina ary alatsaho miaraka amin'ny fampidirana widget sy ny fanaovana tatitra fototra.
Mobify - Ireo mpanonta sy mpamorona tranonkala erak'izao tontolo izao dia mampiasa Mobify Studio hamoronana tranokala finday tsara tarehy. Mobify dia namoaka tranokala finday ho an'ny rafitra fitantanana atiny maromaro, ao anatin'izany ny WordPress, Drupal ary ny hafa. Mobify koa dia manana motera ecommerce.
Mobile roadie - dia nanangana fampiharana mahazatra an-jatony ho an'ny tarika, olo-malaza amin'ny fanatanjahan-tena ary orinasa. Ny rafitry ny fitantanana ny atiny dia mitambatra sy be pitsiny.
Mobdis - Mpanamboatra tranokala finday. Ankehitriny ianao dia afaka mivelatra amin'ny marketing amin'ny finday amin'ny alàlan'ny fitaovanay ahafahanao mamorona tranokala mahavariana mora foana.
mobiSiteGalore - Manamboara Mobile Website anao manokana ao anatin'ny minitra izay toa manankarena amin'ny telefaona marani-tsaina sy mahafinaritra na dia amin'ny finday ambany aza
Mofuse - dia rafitra fitantanana votoaty finday izay afaka mampiditra mpamantatra fivarotana geografika ihany koa. Manamboara, mandefa, mandrefy, mampifangaro ary mampiroborobo ny tranonkalanao finday.
Moovweb - Mampiasa fitaovana fampivoarana maimaim-poana sy kaody Tritium eo aloha, ny tranokala misy rehetra dia azo ovaina, amin'ny fotoana tena izy, ho lasa traikefa finday lehibe. Ity fomba fiasa ity dia antsoina hoe Responsive delivery, ilay analogue an'ny orinasa amin'ny famolavolana tranonkala mamaly.
Ireo mpankafy finday ahy - Fampiharana finday sy tranokala finday mora vidy ho an'ny tontolon'ny orinasa tsy miankina na mitady tombony ary amin'ny alàlan'ny orinasa mpanorina rindrambaiko DIY.
NetObjects Mosaic dia fampiharana an-tserasera ho an'ny famolavolana tranokala finday izay mampiasa mari-pamantarana sary mba hanomezana traikefa amin'ny mpampiasa intuitive miaraka amin'ny fanamorana fampiasana tsy manam-paharoa. Mosaic dia noforonina ho tsotra tsara tarehy, nefa mahery tsy manam-petra, hanampy anao hanangana tranokala finday mahomby ao anatin'ny minitra vitsy monja.
Pejy dia fikambanana tarihin'ny iraka mifantoka amin'ny fanomezana hery ireo orinasa kely (VSB's) miaraka amin'ny fitaovana finday sy sosialy hitombo sy hahomby.
Snappii manangana iPad, iPhone ary Android fampiharana finday mahazatra ho azy haingana kokoa, izay indostrialy manokana ary tsy mila fampandrosoana.
TheAppBuilder - Avereno atao amin'ny fampiharana ny orinasanao. Mamorona fampiharana kilasy orinasa sy governemanta izay mahafinaritra ny mpiasa, ny mpiara-miasa ary ny mpanjifa.
ViziApps - Volavola ny fampiharana anao ary tantano ny angonao tsy misy kaody, avy eo ampandehano eo amin'ny fitaovanao avy hatrany.
Tags: Appmpanamboatra rindrambaikoappifiermpisolo toeranaappsgeyserpie appyfampiharana biznessafo mandorocodiqacomo elfinday fampiharanampanamboatra rindrambaiko findaymotera fampiharana findaympanamboatra fampiharana findaynamana mahafinaritrafanatsarana findaytranokala findaymoovwebireo mpankafy finday ahysnappiitheappbuilder
Fahadisoana 7 hataonao amin'ny fampisehoana marketing
Sep 10, 2011 ao amin'ny 2: PM PM
Ho an'ny 'taolana tsy miteraka' fa Mora ampiasaina, tiako ny WinkSite izay ampiasaiko amin'ny pejiko fanombohana amin'ny findaiko.
Ny tranonkala miaraka aminy http://Delivr.com dia tsara amin'ny famoronana kaody QR sy ny analytics.
Sep 10, 2011 ao amin'ny 3: PM PM
Winksite dia toa tranonkala finday kokoa noho ny fitaovana hanampiana hanovana na hampidirana ny tranokalanao hampiasa finday… diso hevitra ve aho eo?
Sep 11, 2011 amin'ny 12: 33 AM
Tsia, WinkSite dia mamorona tranonkala ahafahanao mivezivezy (efa) atiny mahasoa amin'ny finday (ary koa RSS feeds)
Sep 12, 2011 ao amin'ny 9: PM PM
Zavatra milay. Fitaovana lehibe Doug.
Fanindroany izao no nahitako an'i FiddleFly voalaza tamin'ny herinandro lasa teo. Nanandrana vitsivitsy tamin'ireo fitaovana ireo aho (Tsy fantatro akory fa be dia be) ary hizara aminao sy ireo mpamaky anao fotsiny, FiddleFly ROCKS !! Afaka manangana tranokala namboarina manokana aho ao anatin'ny minitra vitsy. Ok, ka alohan'ny hanombohako manomboka miasa ho an'ireo bandy ireo (mety ho tara io) dia manoro hevitra ny mpamaky anao aho mba hanandrana vahaolana marobe alohan'ny handraisana fanapahan-kevitra farany.
Misaotra hatrany amin'ny lahatsoratra tsara
Sep 13, 2011 amin'ny 3: 35 AM
ahoana ny http://mobdis.com? tranokala finday html5 sy mpanorina doka.
Sep 7, 2013 amin'ny 10: 44 AM
Niampy, miala tsiny amin'ny fanemorana!
Sep 13, 2011 amin'ny 8: 30 AM
Izaho dia nampiasa roa tamin'ireo fitaovana ireo ary nahavita nanatsara kely aza ny ahy laza eo amin'ny Internet mandritra ny dingana. Marina fa tsy zavatra mora izany fa azo tanterahina ary izay ihany no zava-dehibe.
Sep 2, 2014 ao amin'ny 4: PM PM
Azonao atao ve ny mieritreritra ny moovweb ho safidy mety amin'ny lisitrao, azafady mba ampio raha manao izany ianao.